Xildhibaanada Baarlamaanka oo ka digay mar kale in lasoo celiyo Wasiiradii hore - Wargane News
Home Somali News Xildhibaanada Baarlamaanka oo ka digay mar kale in lasoo celiyo Wasiiradii hore
Xildhibaanada Baarlamaanka oo ka digay mar kale in lasoo celiyo Wasiiradii hore
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ee ku kala midoobay labada kudladood ayaa maanta mar kale ka digay in dib lagu soo daro Golaha Xukuumadda cusub Wasiiraddii hore ay diideen.
Kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay ku sheegeen in aysan codka kalsoonida siin doonin haddii Xukuumadda lagu soo darro Wasiiraddii hore ay u diideen oo kasoo qayb qaatay riddida labadii Xukuumadood ee hore.
Xildhibaanada ayaa qoraalkooda ku sheegay in ay ka war heleen in mar kale Xukuumadda lagu soo biirinayo Wasiiradii ay hore uga soo horjeesteen, waxayna soo jeediyeen in la magacaabo Wasiiro ka shaqeyn kara danta umadda iyo gaarsiinta dalka hiigsiga 2016.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo wax ka yar todobo maalmood uga harsan tahay muddadii uu qabsaday in uu kusoo magacaabayo Gole cusub ayaa mar kale wajahaya caqabad kale.
Warar ay heshay Horseed Media ayaa sheegaya in Madaxweyne Xassan Sheikh uu doonayo in lasoo celiyo Wasiirada saaxiibadiis oo ay diideen inta badan Xildhibaanada.
Beesha Caalamka ayaa maalmo kahor walaac ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Dowladda Federaalka oo dib u dhac ku ah hiigsiga sanadka 2016 oo la doonayo in la qabto doorashooyin xor ah.
Hoos ka akhriso qoraalka Xildhibaanada ay kasoo saareen shirkoodii kadib
Wargane Tv: Hees cusub ‘Maantana waa KULMIYE’ iyo XIDIGAHA GEESKA
Somaliland: “Waa In Xuquuqda, Xaqsoorka, Cadaallada Iyo Sinaanta Umadda La ilaalliya Oo Aan Loo Kala Hiilin”
Somaliland: Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Ka Hadlay Koox Dabley Hubeysana Oo Booliska Rasaas Kala Hor Timi Iyo Khasaarihii Ka Dhashay